«Anjaran’ny vahoaka !» -
AccueilTresaka«Anjaran’ny vahoaka !»
08/10/2018 admintriatra Tresaka 0
Afaka milaza izay heveriny ho programa sy tetikasa ary fanamby, hanafahana ity firenena ity anatin’ny fahantrana avokoa ireo kandidà miisa 36. Afaka mampiesona vahoaka izay kalaza amin’izany, afaka mamahan-dalitra vahoaka izay manana traikefa amin’izany, afaka mitafy hodi-janak’ondry ihany koa ireo bibidia rehetra, sns. Fa manomboka omaly hatramin’ny faha-7 novambra 2018 aloha, dia « anjaran’ny vahoaka » indray ny laka, vita hatreo ny anjaran’ny mpanao politika.
Na « 4’mi », na mpitsindroka zaoridira, na mamo lava, na mpandrongony, na tsy an’asa, na gadra lava aza izao dia tompoin’ny kandidà sy ny mpanao politika avokoa. Izay no ilazana hoe « anjaran’ny vahoaka » indray izao, ny mpanao politika indray izao no mandohalika, milelaka ny faladian’ny vahoaka, na dia fotoana fohy ihany aza izany, satria raha vao mivoaka fotsiny ny vokatra ofisialy amin’ny fihodinana faharoa, dia tsy ho fantatr’izay ho lany eo akory ny fisian-dry Razistà sy ry Norine, nihoby ny anarany nandritra ny fampielezan-kevitra.
« Anjaran’ny vahoaka » izao ny laka, koa heverina fa tsy hivarotra mora foana izany fahefana kely ananany mandritra ny fe-potoana vitsy izany ny vahoaka, miisa 36 rahateo koa ireo kandidà, ary samy miliardera daholo. Raha 75 000 fmg isaka ny mpifidy araka ny kajy nataon’ireo manam-pahaizana ireny ny vidin’ny vato nandritra ireo fifidianana nifandimby, maninona raha akarina 250 000 fmg, na 500 000 fmg, na 1 000 000 fmg mihitsy aza amin’ity indray mitoraka ity? Mety mba hitany ihany izany 1 000 000 fmg isan’andro mandritra ny iray volana izany !
Iray volana monja mantsy ny vahoaka no ho tompoin’ireo mpanao politika ireo, iray vola ihany no hilelafan’izy ireo ny faladiam-bahoaka, fa ny efatra taona manaraka aorian’ny fifidianana mbola ankamantatra. Tsy tokony ho menatra, na koa hanaiky izay tolotra homen’ny mpanao politika azy ny vahoaka, fa hitaky sy hampakatra ny sora-bola ho tambin’ny vatony. Aoka kely mantsy mba tsy hifamitaka eto isika amin’ity androany ity, ka hisy hiteny hoe « tsy resa-bola sy fividianana vato no misy eto fa tena faharesen-dahatra”. Iza no filoha lany teto nandritra izay 58 taona nahazoana ny Fahaleovantena izay, ka tena tamin’ny alalan’ny programa?